Inona no fomba tsara indrindra mba hihaona rosiana tokan-tena ho an'ny fifandraisana matotra. Tokony fotsiny aho handeha any Rosia. EM
Indraindray aho mandre avy ry zalahy izay efa mahatsiravina traikefa amin’ny karama isan-taratasy mampiaraka toerana ary manontany izy ireo hoe inona ny fomba tsara indrindra dia ny hihaona afaka rosiana tokan-tena. Ny sasany tamin’izy ireo nanontany ahy raha toa aho mieritreritra fa ho hevitra tsara fotsiny ny mandeha any Rosia hihaona tokana zazavavy any. Aoka fotsiny ny hiala ao Rosia izy irery nandritra ny fotoana fohy. Aoka ny miresaka fotsiny momba ny hanambady vehivavy avy ny firenena. Tokony hihaona iray ny olona, izay antenaina ihany koa dia liana amin’ny fandaminana teo ary manomboka ny fianakaviana, ary avy eo hanorina fifandraisana, ary nametraka soso-kevitra ny fampakaram-bady daty. Araka ny hevitrao ianao, dia mila ny hanosika ny sasany toerana manokana ao anatin’ny firenena mba hanao izany. Tsy misy, mila hainao fotsiny ny toerana misy ny olona iray ary avy eo dia afaka manapa-kevitra izay ianao dia ho velona, raha tsy ao amin ny tanàna. Raha toa ianao ka ao amin’izany tanàna izany, dia mila manapa-kevitra izay toerana tiany ianao na tsara kokoa. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fahafaham-po ny olona tsara. Ary dia inoana hitranga raha toa ianao mandeha fotsiny ny tanàna iray nandritra ny fitetezam-paritra. Tsy misy dikany ho anao, marina. Tsy manana na inona na inona tombontsoa ny maha-mpizaha-tany. Raha toa ka na inona na inona, ianareo dia efa fatiantoka. Ao amin’ny faritra fotsiny ho fohy ny fotoana sy ny vavy dia mitandrema raha toa ianao ka izao vao mitady haingana hook-up, mazava ho azy, raha mitady zavatra lehibe. Ireo izay mitady haingana hook-up, izy ireo dia ho ENY amin’ny mpizaha tany. Hitanareo, tsy misy dikany ho anao, raha ianao no mieritreritra ny momba ny fireneny. Fa raha ianao no mieritreritra ny momba an’i Rosia, tampoka ianao mihevitra fa ny fanambadiana-tsaina ny vehivavy (indrindra fa ny fanambadiana-tsaina ny vehivavy izay te-handao ny zava-drehetra sy ny hifindra any amin’ny firenena hafa) dia nihazakazaka manodidina toy ny bibidia any amin’ireo tanàna rosiana. Raha ny marina, raha ianao no mieritreritra izany, mety ho marina, satria tsy misy bibidia any amin’ireo tanàna rosiana. Ary tsy misy goavana tafiny ny rosiana vehivavy te hanambady vahiny na. Na dia mifindra any amin’ny fanjakana samy hafa, na tanàna ao amin’ny firenena iray ihany dia dingana lehibe ho an’ny ankamaroan’ny olona. Ahoana no lehibe dia ny fiovana ho an’ny olona mifindra any amin’ny firenena izay olona manana fiteny hafa, ahoana ny hevitrao. Fantatro fa betsaka ny olona monina ao amin’ny firenena voalohany manerantany mino fa ireo vahiny avy tsy mandroso milaza nofy ny immigrate misy.
Raha nandeha tany be dia be, ianao dia mahafantatra fa ny olona amin’ny ankapobeny ny fitiavana ny firenena sy ny tsy tsy te-hifindra any ivelany. Raha tsy hoe, mazava ho azy, dia misy ny ady ao amin’ny fireneny sy ny fiainany any loza. Amin’io tranga io dia tsy mety ho an-tapitrisany ny mpitsoa-ponenana, araka ny hitantsika any amin’ny faritra maro manerana ny faritra Afovoany Atsinanana, na Afrika. Noho izany, raha ny hevitrao fa ny fitetezam-paritra any Rosia dia ataovy mora ho anao hihaona fanambadiana ny saina rosiana tokan-tena, dia azo antoka fa tsy. Mba hanaovana izany, dia tena mila tsy mba mitsidika fotsiny fa hifindra any mba ho velona. Avy eo dia mitovy ny tombontsoa amin’ny maha-rosiana ry zalahy, izay manana ny mponina sy ny ara-kolontsaina paradigms eo amin’ny lafiny. Raha tsorina dia, izany rehetra rosiana na dia iray aza vehivavy no fanambadiana-tsaina. Ny fanambadiana dia ny hevitry ny ainy ho azy ireo. Efa notezaina fa ny dikan ny fiainana ho an’ny vehivavy dia mahazo manambady, manan-janaka sy ny hitaiza ny fianakaviana iray. Izy ireo tena mino marina izany. Marina izany ho azy ireo. Fa ny ankamaroan’ny rosiana tokan-tena, toy izay nolazaiko, tsy te-hifindra any amin’ny firenena hafa. Efa tena akaiky sy mafy ny fifandraisan’ny fianakaviana sy tsy te handao ny fianakaviany. Izany ihany no tena ambany dia ambany-jato ny iray vavy, manodidina ny iray na latsaka, izay mety hihevitra ny fifandraisana amin’ny vahiny ny olona. Na dia zara raha manana fahafahana mifankahita amin’ny olona iray ao amin’ny taniny ihany, noho ny mponina, dia mbola tsy te-handinika ny fiarahana amin’ny olona izay mipetraka any amin’ny firenena hafa. Ny antony iray mahatonga izany ny fampielezan-kevitra. Raha miresaka tsy tapaka ny vahoaka rosiana iraisam-pirenena momba ny fanambadiana, dia hilaza aminao mivantana izy hoe:»Tena ratsy hevitra. Ny toe-tsaina loatra ny hafa.»Dia angamba tsy milaza aminareo toy ny vahiny (satria izy ireo dia matahotra ny hanao ratsy ianareo), nefa izy ireo hifampiresaka ny momba azy io, fa avy any ivelany ny vadiny ihany no mikatsaka rosiana vadiny mba manararaotra sy mampahory azy. Toy ny sary hoso-doko amin’ny alalan’ny haino aman-jery rosiana ao amin’ny ezaka mba hijanona eo an-toerana ny tovovavy tsy manambady vahiny, ary mifindra any ivelany. Eny, mazava ho azy, ny fitaovam-propagandy dia mampiseho zavatra ratsy mazava ny tanjona, fa ny olona dia mino ny zavatra hitany amin’ny FAHITALAVITRA. Reny ny rosiana namany manambady Aostraliana dia niantso azy tao afovoan’ny alina ny mangataka raha toa ka dia tena OK ary tsy mody, rehefa mijery toy izany fandaharana amin’ny FAHITALAVITRA. Ny reny dia ka raiki-tahotra, nihevitra izy ireo fa ny vehivavy no nandainga fa niaina tsara, satria izy ireo dia matahotra ny vadiny. Zava-dehibe. Izany dia inona izy ireo fampisehoana amin’ny FAHITALAVITRA rosiana. Noho izany, dia matetika ihany vehivavy izay mahalala ny olona iray manokana, izay manambady vahiny, ary nifindra ho any ivelany fa ny manapa-kevitra ny handinika izany ny safidy. Ny ankamaroan’ny mponina ao Rosia dia tena mampiahiahy momba ny fanambadiana ny vahiny rosiana tokan-tena ny hevitra ankapobeny dia ny hoe ny vehivavy dia tsy ho azo antoka toy izany ny fanambadiana. Izany no antony iray mitondra ao an-tsaina rehefa nieritreritra ny hitsidika an’i Rosia ho toy ny fomba hitsena ny mety ho mpiara-miasa. Ianao tena tsara eny voalohany mifandray amin’ny olona iray izay hitanao fa mety, ary avy eo dia ny fivoriana azy any Rosia. Raha tsy miasa, dia afaka mahatsapa ny voalohany drafitra fotsiny eran’i Rosia ny fomba hitsena ny mpiara-miombon’antoka ho an’ny fifandraisana. Fa ianao, fara fahakeliny, dimam-polo amby dimam-polo vintana fa dia asa. Afa-tsy, rehefa miresaka ny vehivavy iray mandritra ny herinandro vitsivitsy, ianao dia manana ny traikefa voalohany-tanana ny mampiaraka ny rosiana vehivavy sy ny valin’ireo fanontaniana izay te-hahafantatra momba ny fiainana any Rosia, ny kolontsaina, sy ny sisa na inona na inona te-hanana ny valin’ireo. Tsy izany fahalalana sarobidy ny zavatra. Noho izany, tsy very na inona na inona raha toa ka voalohany manomboka miresaka ny rosiana tokan-tena amin’ny aterineto. Fa ianareo mety handresy sy hahatonga ny fiainana amin’ny fomba moramora kokoa raha toa ka maniry ny hihaona olona fanambadiana-tsaina, satria tsy lafo anao na inona na inona mba hiresaka an-tserasera amin’ny ny vehivavy avy Elena modely. Ary izany azo antoka fa afaka hamonjy anao vola be, ary very maina ny ezaka raha ampitahaina fotsiny handeha ho any Rosia ary miezaka mba hihaona tokan-tena, izay misokatra ho amin’ny fifindra-monina ary koa ho afaka matoky ny fizahan-tany fa izy dia tsy hoe rehefa haingana hook-up. Fanontaniana roa momba ny famindran-toerana: Ao ny zava-nitranga. Ahoana no mitranga matetika ny lehilahy manova ny toerana, sy ny hifindra monina ho any an-FSU firenena, rehefa hanambady. Misy ny tena zava-misy ny sampa tsy ampy amin’ny teny zazavavy hanaiky matetika miova ny»an-trano». Ny tiako holazaina rehefa izay mazava tsara raha toa izy mahazo manambady amin’ny lehilahy, izy dia hiova ny tanàna, sy ny firenena angamba imbetsaka isan-taona. (Ohatra, taona iray any Aotrisy, ny antsasany any Arzantina, telovolana ao emirà arabo mitambatra, telovolana ao Malezia, sns.) Robert, izaho no hanome manokana ny fizaham-pahasalamana raha toa ka mila.
Nijery indray mandeha tamin’ny febroary (indray ankehitriny). Fa ny toerana dia ny lehibe indrindra sy vato nasondrotry ny asa fanompoana. Dia ny tena manokana fakan-kevitra misy, raha shoddy tsy mikasa ny handroso ho an’ny tena manokana matchmaking. (Mbola izay a — h prep ny fotoana, mba hanery ho telo-polo min te indrindra ny faritra.) Feno matchmaking fandaharana feo ho ahy ny farany ny farany (tsara indrindra) vintana, rehefa isaky ny fomba hafa tsy nahomby. Ary ny fomba mitaky tanteraka hifantoka, izay tsy misy ao amin’ny iray ihany ny fotoana: ny asa, na ny fampianarana, na ny tetikasa, na ny fialam-boly. Izaho dia mbola tsy vonona ho amin’izany. Robert, ny fakan-kevitra manokana dia ampy ho an’ny sarany ary azo namandrika ny alalan ny toerana, ny rohy etsy ambony. Elena, maniry aho mba ho isa roa ho valin’ny lahatsoratra ity. Efa nifindra toerana nandritra ny fotoana fohy mba Kirov ary izaho fivoriana vehivavy rosiana amin’ny alalan’ny ny firotsahana amin’ny asa andavanandro. Ohatra, nihaona telo samy hafa rosiana na dia iray aza vehivavy fotsiny ho toy ny vokatry ny fahazoana ny tena manokana eo an-toerana famakiam-boky karatra miaraka amin’ny sary eo amboniny. Nahatsikaritra koa aho fa ny Rosiana no tena namana fa mifanohitra ny Amerikana mahaisotra famaritana ny fifankatiavana, ny Rosiana ihany no mila modicum ny andraikitra. Eny, izy ireo no tsy mazava tsiky eny imasom-bahoaka ary eny, mety hamely anareo toy ny hatsiaka sy Hamaky bebe kokoa»Roger, raha mikasa mba hiaina ao Rosia, eny. Raha tsy manao drafitra mba hiaina ao Rosia, fotsiny, fa mitsidika, dia handeha any Rosia dia manantena ny hihaona vehivavy iza no manaiky ho ny vadiny sy ny hifindra any ivelany miaraka aminao, raha tsy misy, amin’ny maha-mpizaha-tany, fa hafa ny tantara sy ny samy hafa setup. Ny hevitra dia ny olona monina any ivelany ho tsara be eny fotsiny dia miresaka ny tena rosiana tokan-tena ny faniriana ary vonona ny hifindra any ivelany any, izay miteny malagasy, mba hahalala bebe kokoa sy hianarana ny fomba hifandraisana amin’ny vehivavy toy izany, raha ny maha mbola ao Hamaky bebe kokoa»Io dia tsara foana diniho. Mieritreritra aho fa ity lahatsoratra ity dia mahazatra anefa, fa tsy mora ho an’ny olona mba manao ilay hadisoana hoe mihevitra fa raha tsy izany. Izany dia mitovy ny toro-hevitra dia mahazo avy amin’ireo olona izay tsy manana traikefa ny fitadiavana ny fitiavana any ivelany. Rehefa dinihina tokoa, tsy tsara kokoa ve izany ny hanambady olona iray izay tia ny kolontsaina sy afaka mizara azy amin’ny anareo. Mitroka kolontsaina vaovao dia tena tsara izany fomba mitombo. Koa, dia azo atao ny fitiavana firenena roa tonta (na telo.). Hey Elena, dia mahatakatra ny zava-drehetra dia nilaza eto, fa dia maninona no tena maro ireo vehivavy rosiana-Vahiny ny olona misedra ny fifandraisana nandritra ny vao haingana FIFA. Ireo fitsidihana ireo mpankafy ihany koa ireo mpizaha-tany, fa araka ny karazana loharanom-baovao dia nisy MARO ny mpivady niforona nandritra ny amboara eran-tany, ary araka ny RT fitsapan-kevitra ny rosiana na dia iray aza vehivavy no MISOKATRA ho manana fifandraisana amin’ny vahiny mitsidika ny mpankafy. Izany no MIFANOHITRA amin’ny ny isa latsaky ny»fotsiny ihany»vehivavy rosiana. Nandritra ny loharanom-baovao isan-karazany sy ny vavolombelona nanatri-maso, dia efa NANAMAFY fa nisy MARO Ny FIARAHANA amin’ny any ivelany Hamaky bebe kokoa»i Adama, ny zava-nitranga ny Amboara eran-Tany dia ny sasany frenzy ny antoko. Tsy zava-mitranga amin’izao fotoana izao, raha toa ka mandeha any Rosia. Tsy mampaninona ny vao mividy ny tapakila sy ny handeha. Fotsiny aho milaza izany ny adala-handany izany vola izany, rehefa afaka mijery fotsiny ny safidy sy ny manomboka ny fifandraisana amin’ny aterineto raha mbola tao an-trano, satria fotsiny dolara. Mianatra momba ny vehivavy, ny soatoavina, ny zavatra tena rosiana ny vehivavy no tena toy izany. Hahitana ireo nofinofiny ary ireo hetahetany, nahoana izy ireo no manao izay ataony. Ny sasany mahazo traikefa. Raha vao no nametraka ny fifandraisana amin’ny olona, ary mihevitra fa tsy maintsy Hamaky bebe kokoa»azoko tsara ny zava-drehetra. Ka raha tsorina dia, izay midika dia, izay vehivavy rosiana ireo ihany no misokatra ny mifanerasera amin’ny vahiny mandritra ny fiadiana ny amboara manerantany, tsara. Noho izany, raha toa ka ny vahiny mitsidika an’i Rosia raha TSY misy fiadiana ny amboara erantany, dia ho tonga tsaboina negativity ny eo an-toerana vehivavy rosiana. Noho izany, dia izay miezaka ianao mba hiteny aho dia nahatakatra aho fa ny olona izay miaina ny fiainana amin’ny LOJIKA. Lojika dia ny zava-DREHETRA ho ahy. Ka raha tsorina dia, ny vahiny afa-tsy»tsara tarehy»ny tovovavy rosiana izy raha manana MPANKAFY ID manodidina ny vozony.
Ny vahiny TSY mpankafy ID, raha tsy misy ny baolina kitra Jersey no Hamaky bebe kokoa»i Adama, ny lojika dia mahatalanjona. Tsy toy ny filazàna amin’ny olona aho, dia toy ny manaiky azy ireo. Izany, raha ny fahitàna azy, ny tena sarobidy toetra ao amin’ny vehivavy. (Vakio ny amin’izao fotoana izao ny lahatsoratra.) Inona aho nanao hoe: moa ny loharanom-baovao dia fako. Dia tsy mbola nisy hoe»mahasarika lehibe»mba vahiny avy amin’ny rosiana ny vehivavy nandritra ny fiadiana ny Amboara Erantany toy ny anao quote. Izany dia mety ho kely kokoa noho ry zalahy dia hahazo na inona na inona hafa firenena nandritra ny hetsika ity, ary izany dia mitovy karazana ankizivavy izay mety hanantona ny manodidina mpitsidika avy any amin’ny firenena hafa. Lojika ampy ho anao. Ny tantara rehetra mikasika ny tombontsoa lehibe avy Hamaky bebe kokoa»Fa izy ireo ihany koa dia naneho ny MARO ny rosiana ankizivavy ao amin’ny tafatafa, izay mihantona avy miaraka amin’ny vahiny. Indrindra fa ny fampahalalam-baovao maro ny vaovao ao afovoany Moskoa hita maro toy izany ny mpivady, ary na dia nanadihady azy ireo. Izy ireo nanao dinidinika maro dia maro ny tanora tovovavy rosiana ao amin’ny live TV YouTube raha afovoan-tanànan’i Moskoa, ary ny ankizivavy niaiky ampahibemaso ny mahasarika ho an’ny Arabo sy ny Meksikana teny ny olona. Ny mpanao gazety no mpitoraka bilaogy na dia hita maro toy izany ny mpivady mihantona manodidina ny foibe Moskoa nanadihady azy, ireo tovovavy rosiana no faly mihoatra noho ny baolina Meksikana Arabo sipa. Aho nahita izany rehetra izany. Ary inona no milaza momba ny vehivavy rosiana ho nandrahona Read more»
← Fomba tsotra mba Hiantso Mexico avy any Etazonia - Meksikana Mampiaraka amin'ny Chat
Mariho Birao rosiana ao Meksika →